IMEX America waa dhacdadii ugu horaysay ee caalami ah oo furto kadib wiishka xayiraada safarka ee Maraykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » IMEX America waa dhacdadii ugu horaysay ee caalami ah oo furto kadib wiishka xayiraada safarka ee Maraykanka
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
IMEX America waa dhacdadii ugu horaysay ee caalami ah oo furma ka dib wiishka xayiraada safarka ee Maraykanka.
Iyada oo wax ka yar laba toddobaad ay ka harsan tahay illaa IMEX America, boqollaal kale oo iibsadayaal caalami ah, bandhig-bixiyeyaal iyo xirfadlayaal warshadeed ayaa hadda xaqiijiyay imaanshaha.
In ka badan 3,000 iibsade caalami ah ayaa u diiwaan gashan inay ka qayb galaan IMEX America.
In ka badan 2,200 oo shirkadood oo soo bandhigay, oo ka kala yimid meelaha loo aadi karo, goobaha, kooxaha huteelada iyo bixiyeyaasha tignoolajiyada, ayaa sidoo kale la xaqiijiyay.
U soo laabashada warshaduhu waa sabab dheeraad ah oo loogu dabaaldego munaasabadaha fiidkii oo ay ku jiraan Site Nite oo ka dhacaya World Resorts cusub, saxiixa MPI Foundation ee Rendezvous dhacdada Drais iyo Hoolka Hogaamiyaasha EIC ee MGM Grand.
"IMEX Ameerika Waa dhacdadii ugu horreysay ee caalami ah oo furma mar haddii la qaaday xayiraadda socdaalka ee Mareykanka 8-da Noofambar, iyo in la isu keeno qeyb weyn oo ka mid ah bulshada dhacdooyinka ganacsiga caalamiga ah iyo Mareykanka ee bandhigga, waxaan rajeyneynaa inaan u gogol xaarno dib u soo kabashada waaxda soo kabashada.” Carina Bauer waxay horay u sii eegaysaa IMEX America, taasoo dhacaysa November 9 - 11 ee Las Vegas.
Iyada oo wax ka yar laba toddobaad ay ka harsan tahay ilaa IMEX Ameerika, boqollaal kale oo iibsadaha caalamiga ah, bandhigayaasha iyo xirfadlayaasha warshadaha ayaa hadda xaqiijiyay imaanshaha.
In ka badan 3,000 iibsade caalami ah ayaa u diiwaan gashan inay ka soo qaybgalaan.
Safka bandhiga oo la fidiyay
Ku dhawaaqista safarka ee Mareykanka ee dhowaan ayaa si weyn u xoojisay joogitaanka Yurub ee bandhigga ka yimid bandhigayaasha ay ka mid yihiin Holland, Ireland, Italy, Scotland, Scandinavia iyo Spain. Dabaqa bandhiga wuxuu ku yaalaa dhamaan afarta geesood ee dhulka Australia, Korea, Japan, New Zealand iyo Singapore oo ka mid ah wadamada Asia-Pacific, oo ay weheliyaan miisaanyo kale oo caalami ah oo ay ku jiraan Dubai, Morocco iyo South Africa. Waxay ku biiraan US, Canada iyo Latin America si ay u abuuraan gaari caalami ah oo dhab ah. Goobahan caalamiga ah ee loo aado waa kuwo caan ah, iyadoo jadwalyo badan oo bandhigayaal ah ay si degdeg ah u buuxsameen wax yar ka dib markii buug-qoraaluhu si toos ah u soo baxeen.
Aagga Tech Hub ee dabaqa bandhigga waa mid ka mid ah kuwii ugu weynaa abid, oo soo bandhigaya shirkado teknoloji oo ballaaran oo ka tarjumaya sida dhakhsaha leh ee qaybtu u horumartay labadii sano ee la soo dhaafay. Shirkadaha waxaa ka mid ah Aventri, Bravura Technologies, Cvent, EventsAir, Fielddrive BV, Hopin, MeetingPlay, RainFocus iyo Swapcard.
Waddada aada Mandalay Bay
Waxaa loogu dallacay sidii 'guryaynta warshadaha', bandhiga sanadkan waxaa lagu wadaa inuu noqdo kulan gaar ah: kaliya maahan daabacaaddii 10-aad ee IMEX Ameerika, bandhiggu wuxuu kaloo leeyahay guri cusub - Gacanka Mandalay. Qorshaynta bandhiga goobta cusub waxa ay u ogolaatay kooxda IMEX in ay eegis cusub ku eegaan naqshada bandhiga oo ay soo bandhigaan qaar ka mid ah sifooyin gaar ah oo ka faa'iidaysanaya Gacanka Mandalaysoo jiidashada iyo kor u qaadida waayo-aragnimada ka-qaybgalayaasha. Mid ka mid ah kuwan waa 'Relaxation Reef', kaas oo martigelin doona barnaamij hawlo samafal ah oo ku yaal goobta Shark Reef Aquarium, oo ay ku nool yihiin in ka badan 2,000 oo xayawaan badeed ah. Qaar ka mid ah fadhiyada waxbarasho ee bilaashka ah ee bandhigga ayaa sidoo kale ka dhici doona Mandalay Bay meelaha bannaan ee yaabka leh.
Waxbarasho ku habboon dhammaan qaybaha
Barnaamijka wax barasho ee bilaashka ah ee socda inta bandhiggu socdo maaha mid la seego, wuxuuna bilaabmaa Smart Monday, oo ay ku shaqaynayso MPI, oo dhacaya 8 November, maalin ka hor. IMEX Ameerika bilaabay Dr Shimi Kang oo ka socda Jaamacadda British Columbia ayaa soo jeedin doona khudbadda Isniinta ee Smart, oo soo bandhigaysa hababkii ugu dambeeyay ee cilmi-baarista ku saleysan ee la qabsiga, hal-abuurka, iskaashiga iyo guusha ganacsi ee waarta.
Kulamo u go'ay kooxaha warshadaha ee kala duwan ayaa u oggolaanaya ka qaybgalayaasha inay shakhsiyeeyaan khibradooda Isniinta smart. Waxaa jira waxbarasho iyo isku xidhid gaar ah oo loogu talagalay maamulayaasha shirkadaha ee Madasha Kulanka Fulinta - oo loogu talagalay madaxda sare ee fulinta shirkadaha Fortune 2000 - iyo Diirada Shirkad cusub - oo u furan dhammaan qorshayaasha ka socda shirkadaha heerarka oo dhan. Hogaamiyayaasha ururadu waxay ku xidhi karaan oo wax ku baran karaan asaagooda Madasha Hogaanka Ururka, oo ay samaysay ASAE.
Maalin kasta waxay ku bilaabataa MPI muhiim ah. Dhaqdhaqaaqayaasha iyo ruxruxayaasha ka baxsan warshadaha dhacdooyinka ganacsiga ayaa mid kastaa keeni doona aragtidooda gaarka ah ee adduunka bandhigga oo ay ku jiraan aasaasaha dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka caalamiga ah iyo bulshada.
Hubka dhiirigelinta ayaa mar kale guriga u ah si ay u muujiso waxbarashada dabaqa, bixinta jadwal buuxa oo fursado waxbarasho oo wax ka qabanaya baahiyaha ganacsiga iyo shuruudaha xirfadeed ee qeexaya dabayaaqada 2021. Fadhiyada waxay daboolayaan hal-abuurka isgaarsiinta; Kala duwanaanshaha iyo helitaanka; Hal-abuurka iyo farsamada; Soo kabashada ganacsiga, gorgortanka qandaraasyada, summeynta shakhsi ahaaneed iyo waarta.
U dabaaldeg soo laabashada warshadaha
Iyadoo dabaqa bandhiggu uu yahay xudunta ganacsiga iyo waxbarashada, khibrada IMEX America waxay ka sii socotaa Las Vegas oo dhan. Safarrada bespoke waxay bixiyaan hoos u dhaca magaalada haddii ay tahay cuntada ugu fiican, khibradaha qarsoodiga ah ama jidka gudaha ee laba goobood oo caan ah: Qasriga Caesar iyo Mandalay Bay. U soo laabashada warshaduhu waa sabab dheeraad ah oo loogu dabaaldego munaasabadaha fiidkii oo ay ku jiraan Site Nite oo ka dhacaya World Resorts cusub, saxiixa MPI Foundation ee Rendezvous dhacdo ee Drais iyo Hoolka Hogaamiyaasha EIC ee MGM Grand.
IMEX America waxay ka dhacaysaa Mandalay Bay ee Las Vegas 9 – 11ka Nofeembar iyada oo la adeegsanayo Smart Monday, oo ay ku shaqeyso MPI, 8da Noofambar.